खुर्सीद हत्याको फितलो अनुसन्धान, प्रहरी भन्छ- अहिल्यै बोल्न मिल्दैन
विनय बाह्रकोटी | २०७५ असोज २४ बुधबार | Wednesday, October 10, 2018 १४:२६:१७ मा प्रकाशित
इटहरी- खुर्सीद आलम हत्या भएको १ महिना पूरा हुन लागेको छ। गत असोज ४ गते विद्यालयको छलफल सकेर घर फर्केने क्रममा घर नजिकै आलमको हत्या भएको थियो। सुनसरीको हरीनगरा गाउँपालिकास्थित भुटाहा बजारमा मध्यान्हको समयमा आलमको हत्या भएको थियो। हत्या लगत्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अपराधीको खोजीकार्य तीव्र पारेको बताएको थियो। भारतको सरकारी पक्षबाट नै खुर्सीदको हत्या भएको अनुमान गरिँदै आएको छ।
हत्याकाण्ड अझैसम्म रहस्यकै गर्भमा छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र नेपाल प्रहरीले छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेर अनुसन्धान गरिरहेको भएपनि अपराधी फेला पार्न प्रहरी अझैसम्म सफल हुन सकेको छैन।
अनुसन्धान प्रक्रिया चलिहरकोले हतारमा अहिल्यै केही भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख राजन अधिकारी बताउँछन्। ‘नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान ब्युरोको विशेष टोलीले आ–आफ्नो तरिकाले अनुसन्धान भइरहेकोले अपराधी पत्ता लाग्नेछ। तर अहिल्यै केही भन्न मिल्ने अवस्था छैन’ उनले भने।
के गर्‍यो सरकारले?
_x000D_ हत्या भएको केही दिनमै नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आलमको परिवारलाई १० लाखको चेक थमाउँदै खुर्सीदलाई सहिद घोषणा गरे। आलमको घरमै आएर उनले कुनै पनि हालतमा हत्यारा पत्ता लगाइछाड्ने विश्वास दिलाए। माटोमुनि पसेर होस् या सात समुद्र पारी गएर नै किन नहोस् हत्यारा पत्ता लागेरै छाड्ने उनले वचन दिए।
गृहमन्त्रीको भनाइ र प्रशासनको अनुसन्धानको तरिकाले हत्यारा पत्ता लाग्न सक्ने देखिँदैन। आलमको हत्या भएको स्थानदेखि भारतीय भूमि पुग्न २० किलोमिटर मात्रै दुरी पार गर्नुपर्छ। त्यस बीचमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका गरी ३ वटा प्रहरी बिट छन्। त्यति मात्र हैन, सीमाक्षेत्र नजिकै सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बल पनि तैनाथ छ। तर पनि भारतीय अपराधीहरू निर्बाध रूपमा नेपाल प्रवेश गरी नेपालीमाथि ज्यादति गरिरहेकै छन्।
के भन्छन् स्थानीय?
_x000D_ यस विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष अपराधी पत्ता लगाउने कुनै पक्रिया नै अगाडी बढाएको छैन। प्रहरी प्रशासनको फितलो अनुसन्धानका कारण अपराधी फेला पर्नेमा शंका व्यक्त गर्छन्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थानीय नेता महम्मद मुक्तर आलम। अहिले पनि सिमानामा प्रशासनको मिलेमतो रहेको उनको भनाइ छ। बारम्बार मुस्लिममाथिी हुने हमलाले नेपालमा मुस्लिम सुरक्षित नरहेको उनी बताउँछन्।
खुर्सीद मुम्बई बम बिस्फोटमा संलग्न भएको भनी भारतीय पक्षले हत्या गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। उनी मुस्लिम दस्ता मर्काकाजु इस्ला स्टेटका केन्द्रीय सदस्य थिए। मुस्लिम धर्मको नाममा अपराधी संरक्षण गर्ने गिरोह रहेकोले उनको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यसभन्दा अघि पनि तत्कालीन इस्लामीक संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमद, मिर्जा दिलसाथ बेगलगायत मुस्लिम धर्मका अगुवाहरूको हत्या भएको थियो।
विगतका घटनाको विषयमा पनि प्रहरीले प्रारम्भिक अनुमानकै भरमा प्रतिवेदन बुझाएको कारण खुर्सीदको हत्या पनि सोहीअनुसारको बनाउन खोजिएको मुस्लिम नेता जाकीर हुसेनको भनाइ छ। आफूले प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्मलाई भेटेर घटनाको विषयमा जानकारी गराएको कारण पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
भुटाहाबासी मुस्लिमहरू यस घटनाले असुरक्षित महसुस हुन थालेको बताउँछन्। स्थानीय सकिल खानका अनुसार खुर्सीद आलमको हत्यापछि सिङ्गो गाउँ नै त्रासमा छ। प्रत्येक वर्ष हुने यस्ता खालका घटनाले सिंगो नेपालमा मुस्लिम समुदाय खतरामा रहेको उनको भनाइ छ। भारतले नेपाली नेताहरूमाथि नियन्त्रण जमाएको र सत्तासँगको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नाले हत्यारा पत्ता लाग्न सक्नेमा शंका हरेको उनी बताउँछन्।